Ufuna u-R65 million umndeni womfundi owakhutshazwa uthisha - Ilanga News
Home Izindaba Ufuna u-R65 million umndeni womfundi owakhutshazwa uthisha
Ufuna u-R65 million umndeni womfundi owakhutshazwa uthisha
Isisulu sithi sashaywa eqolo ngenduku yemophu ngoba sikade silovile
UFAKE uMnya-ngo wezeMfu-ndo KwaZulu-Natal obishini uthisha wase-Ubulinga Seco-ndary School, eMoyeni, eBergville, osolwa ngokushaya akhuba-ze umfundi kamatikuletsheni ngo-Ntulikazi (July) nyakenye ngoba emsola ngokulova esikoleni, nje-ngoba umndeni wakhe ufuna isi-nxephezelo sika-R65 million ngalesi sigameko.
UNondumiso Magubane (20), okuthiwa waphutha esikoleni nge-nxa yokuthi wayenenkinga yesifuba, kubikwa ukuthi washaywa eqo-lo ngenduku wuthisha okumanje uhamba icala lokushaya (yena lo mfundi) eNkantolo yeMantshi ya-seBergville, okulindeleke ukuba libuyele enkantolo maduze.
Ukulimala kwalo mfundi kuthiwa kwaholela ekutheni angakwazi nokubhala izivivinyo zokuphela konyaka, walaliswa esibhedlela isikhathi esingaphezu kwenyanga.
ILANGA liwabonile amasamanisi asefakwe eNkantolo eNkulu ya-seMgungundlovu ngaphansi kwe-nkampani yabameli, iMabuza Attorneys.
UNondumiso obuye alekelelwe yizinduku uma ehamba, kuthiwa kunzima ukuthatha unyawo alu-beke, ngenxa yokulimala.
Ekhuluma neLANGA uNkz Celi-mpilo Magubane ongudadewabo omdala wesisulu, uthe: “Udade-wethu akahlali ekhaya kodwa ubeqashile ngoba esondezela isikole.
“Ngesikhathi kubuyelwa ezikoleni ngonyaka odlule, eminye ye-migomo bekuwukuthi kumele ba-fake izimfonyo uma besekilasini. Ngenxa yokuthi uNondumiso une-nkinga yesifuba, wabanenkinga yokuphefumula, walova esikoleni izinsuku ezimbalwa ngoba kumele ayobonana nodokotela.
“Emuva kwezinsuku esengcono, waphindela esikoleni wabikela uthishanhloko ngesizathu sokuphutha kwakhe esikoleni.
Uthishanhloko wamvumela ukuba aye ekilasini aqhubeke nokufunda. Inkinga yaqala kuthisha wakhe we-English owala ukuzwa isizathu sokuphutha kukaNondumiso, wathi kuzomele aye naye ehhovisi lakhe amshaye ngaphambi kokuba amvumele ukuqhubeka nokufunda.
“Ngenxa yokuthi wayebona ukuthi uzosala ezifundweni, uthi wa-gcina evumile ukuya ehhovisi lika-thisha, wamshaya ephindelela ngenduku yemophu eqolo.
“Esebuyele ekilasini, uthi wezwa izinhlungu eqolo waze wa-goduka ekhala.
“Ngakusasa wavuka isingenza-nsi sakhe singasasebenzi. Indaba yaqala eya endlini yangasese njengoba engakwazanga ukubuya khona ngenxa yokuthi wayengasakwazi ukuhamba.
“Wangithumelela umlayezo ku-makhalekhukhwini kwathi uma ngimshayela, wangixoxela ngo-kwenzekile, ethi akusahambeki. Sashayela i-ambulance eyamlanda waphuthunyiswa esibhedlela,” kusho yena.
Uthi abasesikoleni bafika kubo beyoxolisa, bacela ukuba icala li-ngavulwa ngoba bethi uthisha uzo-khokha inhlawulo.
“Kuyimanje uNondumiso aka-kwazi ukuzihambela, udinga ukulekelelwa. Ngikhuluma nje uha-mba i-physiotherapist okuyiyo eqa-phe isimo sakhe njengoba enga-kwazi ukuzihambela kahle.
“Umndeni ukhathazekile ngesi-mo sikaNondumiso. ugcine enga-kwazanga ukuqeda umatikule-tsheni ngenxa yalokhu kulimala, sivumelene siwumndeni ngokuthi sifuna isinxephezelo sikaR65 mi-llion, kodwa-ke konke sikushiye ezandleni zabameli,” kusho yena
UMnu Godrich Gadree omele lo mndeni – ngaphansi kweMabuza Attorneys – ukuqinisekisile ukuthi bayalusebenza udaba lwesinxe-phezelo, waqinisekisa nokuthi ica-la lokushaywa kwalo mfundi baya-lilandela kanti liyabuyela maduze.
UMnu Muzi Mahlambi okhulu-mela uMnyango wezeMfundo Kwa-Zulu-Natal, uthe yize ebengakezwa ngalolu daba kodwa unesiqi-niseko sokuthi lusezandleni zabameli.
Uthe umnyango uhlala ukugcizelela ukuthi othisha mabangazi-shayi izingane ngoba lokhu ku-phambene nomthetho.
“Sihlala sikubalula ukuthi uthi-sha osuke eshaya umfundi usuke ezenzela yena lokho ngoba umnya-ngo kawuhambisani nakho futhi akuvumelekile,” kusho yena.
Previous articleKuphelile ukuqagela ngezinguquko zoKhozi
Next articleUbalisa ngamaphutha uHunt